Ajuju na ntughari uche, nke izu | KONGOLISOLO
Site na: KongoLisolona: January 1, 2017 00: 55 Enweghị asịsa
N'ikwu eziokwu, ọdịnihu bụ ihe omimi, ekwula mgbe ọ bụla!
Fọrọ nke nta ka mmetụta niile bụ ndị ndụmọdụ ọjọọ, ọkachasị iwe na ịkpọasị. Agbanyeghị, anyị Congolese (African) ka anyị mee ka ha bụrụ ike nnweta, ihe kachasị nke omume na omume anyị niile.
Kedu mgbe anyị ga-emesị kwụsị ịme mgbagha na iche echiche dị ka ụmụ akwụkwọ iwu kwadoro nke ikike anyị ime ihe na ịpụta?
Ihe nkiri na ịgba ohu omee bụ Black. Ma ihe nkiri banyere ndị eze & eze nwanyị nke Africa, onye na-eme ihe nkiri bụ White… (VIDEO)
Ọkt20 02: 16